Semalt: Top 6 Zvikamu zveWebhu Rokugadzira Basa
Kukohwa kwewebhu ndiyo nzira yakanakisisa yekuunganidza mashoko kubva paInternet. Kare, webmaster uye vatengi vanogona kubvisa dambudziko chete kana vaine mazano makuru ekugadzira, asi iye zvino nhamba huru ye kugadzira zvombo yakatangwa. Mozenda ndeimwe yepamusoro web scrap ing mapurogiramu. Iine inoshandiswa-user-friendly interface uye inokubvumira kubvisa dare pasina unyanzvi hwekugadzira - grain bins repurposed. Nyanzvi dzeMozambique dzakagadzira mazana ewebhu webhutisheni dzinoita mamiriyoni emaji ewebhu paawa. Hwakadzika uye huwandu hwavo hwezviitiko hahufananidzi, uye dzakanaka mukugadzira matanho makuru ekugadzirisa uye kugadzirisa zvinetso zvakaoma. Izvozvo zvakasiyana-siyana zveMozenda zvinotsanangurwa pasi apa.
Chiratidzo chepamusoro # 1: Dheyo yakagadzirika uye inogona kuoneka
NaMoenda, zviri nyore kuti chero munhu atore data inogona kuverengwa uye inogona kuitika mune imwe nyaya. Kusiyana nedzimwewo zvese zvekuchera mazano, Mozenda inokubatsira kubvisa ruzivo kubva kune mawebsite ane simba. Inoparadzanisa kushamwaridzana kusina maturo uye inoita kuti iwe ufarire data nokukurumidza. Uyezve, Mozenda inogadzira zvinyorwa zvishoma pane dzimwe nzvimbo dzepawebhu dzinotsvaga zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti udzike mapeji akawanda ewebhu sezvaunokwanisa.
Nhamba yepamusoro # 2: Dhiyabhorosi (data)
Nhamba huru ye web scraping tools yakabudisa mashoko, asi ine mitsara yakawanda yekupereta nemagiramu.Kusiyana nemabasa iwayo, Mozenda inokuwana iwe yakarurama uye data isina kukanganisa munguva pfupi. Kana iwe uchida kutsvaga mapeji akawanda ewebhu uye unetseka pamusoro pehutano, unofanira kuedza Mozenda pakarepo. Hazvisi kungotsvaga data yako chete asiwo ichatarisa unhu hwayo uye inobvisa zvikanganiso zvose kubva pamigumisiro yekupedzisira.
Chiratidzo chepamusoro # 3: Hapana kugadziriswa kunoda
Kusiyana nedzimwe web scraper s, Mozenda haifaniri kuchengetedza uye inogona kushandiswa chero nguva, chero kupi zvako. Kunyangwe iwe usina unyanzvi hwakakwana hwekugadzira, iwe unogona kushandisa zviri nyore chirongwa ichi kuti uwane deta. Uyezve, hazvidi kuti iwe unyore HTML code. Nokudaro, Mozenda yakakosha zvakaenzana kune vadzidzisi uye vasiri mapurogiramu.
Chiratidzo chepamusoro # 4: Kubatanidza zvakajeka nematongerwo emabhizimisi
Nhasi mamiriro ekutengeserana emabhizimisi, vanhu vakasiyana-siyana vanobatanidza nekutsvaga deta uye nzira dzekusunganidza data. Makambani anotarisa web-scraping zana dzinopikira maitiro ekurumidza. NeMoenda, iwe unogona nyore nyore kuvaka bhizinesi rekutsvaga uye unotsvaga marudzi akasiyana e data pasina chero dambudziko. Mozenda iri mukurumbira pakati pemabhizimisi nekuda kwekubatanidzwa kwayo nebhizimisi. Hazvisi zvakanaka chete kune mabhizimisi anozivikanwa asiwo kutanga kwekutanga uye mabhuku ega ega.
Chinyorwa chepamusoro # 5: Mavara anotora webhusaiti
Mozenda ndiyo chete chigadziro chinoshanda nemashizha ane simba uye inoronga uye inogadzira data yakajeka yevashandi vayo. Iwe haufaniri kunyora zvinyorwa uye unogona kutanga kutora data mukati memasekondi. Mozenda ichawana ruzivo rwakakunakira iwe kubva kune mawebsite ane simba uye ichagadzirisa dhesi dzisina kufanirwa, kudzorera mashoko akarurama uye asina kukanganisa.
Chirongwa chepamusoro # 6: Chinotsigira mafomu akasiyana
Mozenda ichabvisa dudzire uye ichishandure muSVV, JSON, XML uye XLS mafomu. Iwe unogona kuchengetedza deta iri mu database kana kuti kukanda kune yako hard drive zvakanaka. Kunyanya, Mozenda inogona kupedza zvose zvinyorwa nemifananidzo kune vashandisi.